‘Ukuzibulala kukamsolwa kuvuse amanxeba’ | News24
‘Ukuzibulala kukamsolwa kuvuse amanxeba’
ISITHOMBE : facebookErnest Mabaso kanye nomunye wezisulu okusolwa ukuthi wazibulala, uDudu Khoza.
UMNDENI wamalunga ayisikhombisa atholwa ebulewe agqitshwa eVlakfontein eGoli uthi awuphathekile kahle ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi umsolwa uzibulele esiteshini samaphoyisa.
UMnu Ernest Mabaso (27) nobengumsolwa kuleli cala utholwe ezilengise ngezintambo zezicathulo esiteshini samaphoyisa eKapa ngoLwesine olwedlule mhla zingama-24 kuMasingana (January). UMnu Mabaso uzibulala nje bekulindeleke ukuba avele enkantolo nalapho kade ezofaka khona isicelo sebheyili ngmaacala ayisikhombisa okubulala uNks Dudu , uNomfundo , uMbali , uKarabo, uNkanyiso,uSbonga kanye noLuyanda kanjalo nawokudlwengula.
Izidumbu zalaba abashona zatholwa ngenyanga kaMfumfu (October) kanti ezinye zazo zasezonakele. Zonke izisulu kulesi sigameko zidabuka KwaCaluza kodwa bezihlala eGoli ngenxa yomsebenzi.
UMnu Mabaso ubebhekene nala macala nomunye umsolwa uMnu Fita Khupe (61).
UNkk Thoko Khoza, ongunina aphinde abe nguninakhulu kulabo abashona, uthe bengumndeni kabaphatheke kabi ukuzibulala kukaMnu Mabaso njengoba ethi kuvele kwavusa kakhulu amanxeba abengakapholi.
“Angijabulile neze ngalesi sinqumo sakhe sokuthi avele akhethe ukuzibulala ngoba mina bengisalindele ukuthi uzokhuluma asho ukuthi kungani enza yonke le nto ayenza. Mina ngisele anginangane anginabazukulu kodwa yena usekhetha ukuthatha indlela elula. Ngiyalidinga iqiniso ngifuna ukwazi ukuthi kungani abulala izingane zami.
“Le nto ayenzile usevele wavuselela amanxeba akade engakapholi vele. Uyena ebengithembele kuyena ukuthi uyolikhipha iqiniso njengomuntu ebesimazi njengomndeni futhi sisondelene naye.Yonke le nto isizwisa ubuhlungu njengomndeni. Besingazitsheli ukuthi angakhetha ukwenza into enjengalena ngaphambi kokuba akhulume iqiniso,” kubeka yena.
UNkk Khoza uqhube wathi bayakholelwa ukuthi uMnu Mabaso wayengeyedwa ngesikhathi enza bonke lobu bugebengu. Uthe bengumndeni bafuna ukwazi ukuthi obani abanye abadlala indima ekubulaweni kwezisulu.
Ithemba lethu selincike kumsolwa lona oyedwa osele. Sinethemba lokuthi uzokhuluma asho ukuthi izingane zami zazenzeni aphinde akhiphe nabanye ababekhona uma kungukuthi ngempela babekhona. Asisoze sakuthola ukuphumula singakalitholi iqiniso lokuthi yini eyaholela ekutheni kuze kubulawe amalunga omndeni wethu,” kubeka yena.
Umndeni wakwaKhoza ngaphambilini waveza ukuthi uMnu Mabaso wafika kubona wazibika njengengane eyalahlwa yindodana kaNkk Khoza engasekho, wabe esecela indawo yokuhlala. Watshela lo mndeni ukuthi uyalelwe osonhlalakahle ukuthi akeze kuwona azocela indawo yokuhlala. Wahlala nalo mndeni endaweni yaKwaCaluza wabe esesuka eyohlala nala malunga omndeni asolwa ngokuwabulala eGoli ngoba ethi uyofuna amathuba omsebenzi.